အပူရှပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်း (၇)ခု – Shwehealth.com
အပူရှပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်း (၇)ခု
15. မေ 2016 23. မေ 2016
မြန်မာနိုင်ငံသည် အပူပိုင်းနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းဆယ်စုနှစ်များတွင် ကမ္ဘာ့အပူချိန်များမြင့် တက်လာသကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏အပူချိန်သည်လည်း မြင့်တက်လျက်ရှိပြီး နှစ်တိုင်းလိုလိုပင် အပူချိန်စံချိန်သစ် များကို မြင်တွေ့နေရသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အယ်လ်နီညိုဟုခေါ်သော ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်၏ သက် ရောက်မှုကိုလည်း ခံနေရပြီး ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအမြောက်အမြားတွင် အပူချိန်များ မြင့်တက်လျက် ရှိသည်။ အယ်လ်နီညိုဆိုတာဘာလဲ။ အယ်လ်နီညိုဆိုသည်မှာ တောင်အမေရိက ကမ်းရိုးတန်းတွင် အီကွေတာ နှင့်နီးကပ်သည့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ ပူနွေးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ် ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်သည် ပုံမှန်ကုန်သည်လေဟုခေါ်သော လေများအားနည်းမှုကြောင့် အနောက်ပစိဖိတ် တွင် တွေ့ရှိရသော ရေစီးကြောင်းကို အရှေ့ဖက်သို့ပြောင်းပြန်စီးဆင်းစေရာတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အဆိုပါ ပူနွေးသောရေများက အရှေ့ပစိဖိတ်ရေမျက်နှာပြင်တွင် ပုံမှန်အားဖြင့် တွေ့ရလေ့ရှိသော ရေအေးများနေရာ တွင် ၀င်ရောက်လာပြီး ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားရှိ ရာသီဥတုပုံစံများအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိသည့် လေထု အပြောင်းအလဲကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါအခြေအနေတွင် အပူရှပ်ခြင်းသည် အန္တရာယ်အများဆုံး ကျန်း မာရေးပြဿနာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာလေသည်။
အပူရှပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကိုယ်ပူခြင်းနှင့် အလွန်မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့်ထိတွေ့ရသောအခါ ခန္ဓာကိုယ် ၏ အပူချိန်ထိန်းညှိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ပျက်ယွင်းခြင်းကြောင့် သတိလစ်မေ့မြောခြင်းတို့ ပါဝင်သော အခြေအနေ တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် အပူကြောင့်ထိခိုက်မှု၏ အပြင်းထန်ဆုံးပုံစံဖြစ်ပြီး ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ် အခြေအနေတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြသည်။ အပူရှပ်ခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်နှင့် အခြား ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ များကို ပျက်စီးစေခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်စေခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ယင်းသည် အသက် ၅၀ ကျော်သူများ တွင် အဓိကဖြစ်နိုင်သော်လည်း ငယ်ရွယ်၍ကျန်းမာသော သူများတွင်လည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အပူရှပ်ခြင်းသည် မြင့်မားသောအပူချိန်များနှင့် ကြာရှည်စွာထိတွေ့ခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် ပူးတွဲ၍ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ မူးလဲခြင်းသည် အပူရှပ်ခြင်း၏ ရှေးဦးလက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားလက္ခဏာများမှာ တဆတ်ဆတ်ထိုး၍ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ပူလွန်းသော်လည်း ချွေး မထွက်ခြင်း၊ အရေပြားပူ၍ နီရဲခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
အပူရှပ်ခြင်းသည် အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက် ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများ မရရှိ မီတွင် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများဖြစ်သည့် လူနာအား လေအေးပေးစက်ရှိသော နေရာတွင်ထားခြင်း၊ မလိုအပ် သောအ၀တ်အစားများကို ချွတ်ပစ်ခြင်း၊ ယပ်ခတ်ပေးခြင်း၊ အရေပြားကို စိုစွတ်စေရန် ရေစွတ်ပေးခြင်း၊ ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ခြံနှင့်လည်ပင်းတို့တွင် ရေခဲကပ်ပေးခြင်းနှင့် ရေချိုးကန်သို့မဟုတ် ရေအေးဇလုံထဲတွင် စိမ်
ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများသော သူများမှာ မွေးကင်းစ ကလေးများနှင့် အသက် ၄နှစ်အောက် ကလေးငယ်များ၊ အသက် ၆၅ နှစ်အထက် လူကြီးများ၊ အလွန်ဝသူများ သို့မဟုတ် ပိန်လွန်းသူများ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ ရှိသူများ၊ အရက်စွဲနေသူများနှင့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုခုရှိသူများ ဖြစ်ကြသည်။
အပူရှပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများ
(၁) သင့်လျော်သော အ၀တ်အစားများကို ၀တ်ဆင်ခြင်း
ပေါ့ပါးသောအ၀တ်များ၊ အရောင်ဖျော့သောအ၀တ်များနှင့် ပွသောအ၀တ်များသည် ပူပြင်းသော ရာသီ ဥတုအတွက် သင့်လျော်သောအ၀တ်များဖြစ်ကြသည်။ အနားသပ်အပြားကြီးကြီးပါသော ဦးထုပ်ကိုဆောင်းခြင်း ကလည်း ကောင်းသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
(၂) နေရောင်ခံလိမ်းဆေးများ အသုံးပြုခြင်း
နေရောင်ခံလိမ်းဆေးများသည် နေရောင်ခြည်မှ မလိုလားအပ်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။ နေရောင်ကာကွယ်မှုအညွှန်း (SPF) ၃၀ နှင့် အထက်ပါဝင်သော လိမ်းဆေးမျိုးကို အသုံး ပြုသင့်သည်။
ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် နေ့စဉ် အနည်းဆုံး ဖန်ခွက် ၈ခွက်ခန့် ရေကို သောက်သုံးသင့်သည်။ သစ်သီးဖျော်ရည်များ သို့မဟုတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်များကိုလည်း သောက်သုံး နိုင်သည်။ အပူချိန်နှင့် စိုစွတ်မှု မြင့်မားချိန်များတွင် အီလက်ထရိုလိုက်အားဖြည့်အချိုရည်များကိုလည်း ရေအစား သောက်သုံးပေးနိုင်သည်။
(၄) အိမ်ပြင်ပတွင် လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ရာတွင် သတိထားခြင်း
ပူပြင်းသောအပူချိန်တွင် အိမ်ပြင်ပ၌ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ခြင်း ပြုရမည့်သူများ အတွက် အထူးသတိထားရန်လည်း လိုအပ်သည်။ အဆိုပါအခြေအနေမျိုးတွင် လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ် အလုပ် မလုပ်မီ အနည်းဆုံး ရေ ၇၀၀ မီလီလီတာ ခန့် ကြိုတင်သောက်သုံးပေးသင့်ပြီး နောက်ပိုင်းအချိန်များတွင် ရေ မဆာလျှင်ပင် မကြာခဏသောက်သုံးပေးသင့်သည်။
(၅) နေပူသောနေရာများသို့ သွားလာခြင်းကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကျဉ်ခြင်း
အပြင်သွားရမည့် အစီအစဉ်များကို အချိန်ပြောင်းရွေ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင် သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် မနက်နေမထွက်မီ သို့မဟုတ် နေ၀င်ပြီးချိန်များတွင် သွားလာခြင်းက ပို၍ ကောင်းမွန်မည် ဖြစ်သည်။
(၆) ကဖင်းသို့မဟုတ် အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်သော အရည်များအား ရှောင်ကျဉ်ခြင်း
ကဖင်းသို့မဟုတ် အယ်လ်ကိုဟော ပါဝင်သော အရည်များသည် သင့်အား ရေဓာတ်ပိုမို၍ ဆုံးရှုံးစေနိုင် သောကြောင့် ရှောင်ကျဉ်သင့်သည်။ အီလက်ထရိုလိုက်အားဖြည့်အချိုရည်များနှင့် သစ်သီးဖျော်ရည်များကို ရွေးချယ်ခြင်းက ပို၍ သင့်တော်မည်ဖြစ်သည်။
(၇) ရပ်ထားသောကားထဲတွင် နေခဲ့ခြင်းအား ရှောင်ကျဉ်ခြင်း
ရပ်ထားသော ကားထဲတွင် မည်သူ့ကိုမျှ မထားခဲ့ပါနှင့်။ ယင်းသို့ထားခဲ့ခြင်းသည် ကလေးများတွင် အပူဆိုင်ရာ သေဆုံးမှုကို အများဆုံးဖြစ်စေသည့် အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်များသာမက သက် ကြီးရွယ်အိုများနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုလည်း အရိပ်ထဲတွင် ရပ်ထားသောကားထဲတွင် ဖြစ်စေကာမူ မထား ခဲ့သင့်ပေ။